राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको स्पष्टिकरणः कार्यालय सहयोगी र चालकको बैंक खाता नभएकाले तलब आफैँ बुझेँ - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
राष्ट्रियसभाका अध्यक्षको स्पष्टिकरणः कार्यालय सहयोगी र चालकको बैंक खाता नभएकाले तलब आफैँ बुझेँ
प्रकाशित मिति: २३ बैशाख २०७६, सोमबार
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले कार्यालय सहयोगी र चालकको बैंक खाता नभएकाले तलब आफैँ बुझेको बताएका छन । प्रेस सहयोगी अशोक पौडेलको नाममा विज्ञप्ति जारी गर्न लगाउँदै अध्यक्ष तिमल्सिनाले कर्मचारीको बैंक खाता नभएकाले आफैँले तलब बुझेको दाबी गरेका हुन । यसअघि अध्यक्ष तिमल्सिनाले संसद सचिवालय सवारी चालक लिएर फेरि चालकका नाममा छुट्टै तलब बुझेको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।
तिमल्सिनाका सहयोगी पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्ति यस्तो छ
‘चालक र सहयोगीमा आफ्नै नाम राखेर चार स्वकीय कर्मचारीको तलब बुझ्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष’ शिर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकमा मिति २०७५ वैशाख २२ गते प्रकाशित समचार र सो समचारलाई तोडमोड गरी अन्य अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जालमा सम्माननीय अध्यक्षज्यूको गरिमामा आँच पुग्ने गरी गरिएको गलत प्रचारप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
संसदमा निर्वाचित भएर आउने पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरुलाई संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ ले पारिश्रमिक तथा सुविधाको व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ५ ले आफ्नो कार्यकालभरको निमित्त पदाधिकारी र सदस्यले स्वकीय सचिवालयको लागि अनुसूची २ मा उल्लेख भए बमोजिमको कर्मचारी सुविधा पाउनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम सम्माननीय अध्यक्षज्यूको स्वकीय सचिवालयमा ८ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था छ ।
संसदका पदाधिकारी र सदस्यज्यूहरुको स्वकीय कर्मचारीको पारिश्रमिक विगतका संसद, पुर्नस्थिापित व्यवस्थापिका संसद, पहिलो तथा दोस्रो संविधानसभा, रुपान्तरित व्यवस्थापिका संसद र संघीय संसदको निर्वाचनपछि पनि २०७५ पुष महिनासम्म सम्बन्धित पदाधिकारी र सदस्यहरुको खातामा नै जाने प्रचलन रहेको थियो । यसरी सम्बन्धित पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरुले समष्टिमा प्राप्त रकमबाट स्वकीय कर्मचारीलाई मासिक रुपमा उपलब्ध गराउँदै आएको यथार्थ सर्बविधितै छ ।
२०७५ पुषपछि संघीय संसद सचिवालयले पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरुका स्वकीय कर्मचारीको पारिश्रमिक सम्बन्धित कर्मचारीकै बैंक खातामा जाने व्यवस्था मिलाउन सुरु गरेको हो । यसै क्रममा राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यूको सचिवालयमा कार्यरत स्वकीय कर्मचारीको पनि व्यक्तिगत बैंक खाता माग गर्ने र प्राप्त भएकाहरुको हकमा सम्बन्धित कर्मचारीकै खातामा रकम पठाउने व्यवस्था सुरु भइसकेको छ । तर, सचिवालयमा कार्यरत सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीको बंैंक खाता उपलब्ध भइनसकेका कारण विगतमा जस्तै उनीहरुको पारिश्रमिक अध्यक्षज्यूको खातामार्फत भुक्तानी भएको हो । सवारी चालकको खाता नम्बर हालै प्राप्त भएको छ । पारिवारिक कारणले नागरिकता प्राप्त गर्न कठिनाई भोगिरहेको कार्यालय सहयोगीको हकमा बैंक खाता खोल्न सकिएको छैन । निजको नागरिकता बनाउन यस सचिवालयले सम्बन्धित कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । उनीहरुको बैंक खाता प्राप्त हुनसाथ सोझै व्यक्तिको खातामा जाने प्रबन्ध हुनेछ ।
यो यथार्थलाई तोडमोड गर्दै संघीय संसद सचिवलायको भुक्तानी भरपाईलाई समेत पत्रिकाले आफ्नो अनुकूल परिमार्जन गरी सि नंं। १३ देखि १६ सम्मका दुई हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीको पारिश्रमिक ‘सम्माननीयको खाता’ लेखिएको ठाउँमा श्री गणेशप्रसाद तिमिल्सिना लेखेर त्यही नै आधिकारिक भरपाई जसरी प्रस्तुत गरिएको छ । साथै यथार्थ नबुझि सो तथ्यलाई तोडमोड गरी पत्रिकाको साभार गर्ने नाममा अन्य अनलाइन मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा सो रकम सम्माननीय ज्यूले नै आफ्नो पकेटमा राखेको, चालक र कार्यालय सहयोगीमा आफ्नै नाम राखेर चार जनाको तलब खाएको भनी गरेको कुप्रचार तथा पित पत्रकारिताप्रति खेद प्रकट गर्दछौं । यस्ता भ्रम तथा हल्लाका पछाडि नलाग्न सम्पूर्ण जनता तथा शुभ चिन्तकहरुमा आग्रह गर्दछौं ।
२३ वैशाख २०७६ ।
ओलीले सुम्पिएलान् प्रचण्डलाई नेकपाको एकल जिम्मेवारी ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सिंगापुरमा १५ दिनको उपचारपछि शुक्रबार स्वदेश […]
विप्लवको नेकपाद्वारा सुनसरीका दुई स्थानमा बम प्रहार
इटहरी । सुनरीमा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले बम आतंक मच्चाएको छ । इटहरीको सुस्मा गोदावरी कलेज र […]
सिंगापुरबाट बालुवाटार फर्केलगतै प्रधानमन्त्री राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय
काठमाडौं । नेकपा अध्यक्ष एवंम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वदेश फर्केलगतै राजनीतिक भेटघाट शुरु गरेका छन् । […]
छैटौंपटक प्रधानमन्त्रीकाे प्लाज्माफेरेसिस,कस्तो छ स्वास्थ्य?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘मिर्गौलासम्बन्धी एन्टिबडी’ को उपचारक्रममा सोमबार नेसनल […]
फेरि भिडियो बैठकः हाइहेल्लो मात्रै हो कि मन्त्रिपरिषद्कै बैठक हो ? जनता अन्योलमा
काठमाडौं । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसहित मन्त्रीहरू मंगलबार दिउँसो करिब १ बजेको आसपासतिर […]